Ukuhambelana kwe-Leo kunye ne-Aries: ♥ Esi Sisibini esinganelisekiyo! - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Esi sibini siqulunqwe ngeenkokheli ezimbini zendalo ezinobuqhetseba obuphawulekayo, nangona kunjalo zidibanisa i-egos ezimbini ezinkulu ... I-innovative genius kunye nokuzimisela kwe-Aries kudibaniswa ne-charisma engenakunqandwa kunye nokunyamezela kukaLeo kuya kubavumela ukuba bagqibe iiprojekthi ezinqwenelayo. Uthando lokwenene luya kuzalwa ukuba zombini iimpawu zihlonipha ukuqaqamba komnye nomnye. Nangona kunjalo, ukuba ubudlelwane babo abuphumeleli, ubuncinane baya kuba namava angalibalekiyo othando kunye. Funda ukuze ufumane iinkcukacha ezithe kratya malunga nokuhambelana kwe-Leo kunye ne-Aries kwaye ufumane amanqaku abo othando.
'ULeo noAries bobabini banqwenela amandla!'
Inqaku lokuhambelana kwe-Leo kunye ne-Aries: 4/5
Uxinzelelo kobu budlelwane buvela kubo umnqweno oqhelekileyo wamandla. Njengemiqondiso emibini ebotshelelwe kwinto yoMlilo, ubudlelwane babo bosapho, ubuhlobo, kunye nobuchwephesha bunokuzenzekela, kodwa nangona kunjalo bukhuthazwe kukuncoma uphawu lomnye. Amaxesha ngamaxesha, kufuneka bayivume ngokwabo loo nto Aries ubuntu uyoyika ukulahlekelwa ngumntu oxabisekileyo njengoLeo, ngoxa uLeo enobubele kunokuba uAries ekholelwa. Ezi zimbini Iimpawu zomlilo zidibene kakuhle kwizodiac, ezibanika a ukuqonda okuhle okuzenzekelayo. Kubuhlobo, usapho okanye ubudlelwane bomsebenzi, nokuba ugunyaziso lwabo ludala ukungqubana, kukho ukuncoma okuthile phakathi kwabo. Bayaluthanda uthando yaye balubonisa omnye komnye ngokuzimisela, kodwa kufuneka bavume.
Yintoni eyenza uLeo noAries bahambelane?
U-Leo unesisa ngaphezu kwe-Aries ethanda ukuvuma, kodwa kunye le miqondiso mibini ngokwenene a umlilo owenziwe ezulwini. Ezi zodiacs zimbini ziyafana kangangokuba ekugqibeleni zinokufana ujongene nomzabalazo wamagunya. Ukuba bafuna ukuba ubudlelwane babo buhambe umgama, uLeo kunye no-Aries kufuneka bakhumbule indlela yokwahlula uthando olunyulu. Inkqubo yemihla ngemihla ekruqulayo inokusithoba esi sibini. Nokuba awunawo amandla afanayo, nangona kunjalo, unokuzifumana uvumelana ngeenjongo ezininzi kwaye oku kunokukuvumela ukuba uphuhlise Ubudlelwane obuguquguqukayo obugcwele ukujija kunye nokujika! U-Leo unesisa ngakumbi kune-Aries kwaye uya kubavumela ukuba babe nesandla esiphezulu ngamaxesha athile. Ngokuphathelele ama-Aries, bayesaba ukulahlekelwa ngumntu onjalo oxabisekileyo kwaye baya kwenza imizamo efunekayo yokulungelelanisa. Ke ukuba umba wegunya kunye nokuzingca kweempawu zombini uzinzisiwe, eli inokuba libali lothando elimangalisayo.
Funda ngakumbi malunga noku ngena 15 iinyani malunga Leo -
Njengabantu ababini bebonke, abanomdla nabanomlilo, Iingxwabangxwaba kunye neengxabano phakathi komanyano lwakho zikho kuzo zonke iindawo kwaye oku kunokukhokelela ekonakaleni kobudlelwane bakho. Iqhekeza lengcebiso, funda ukubeka i-ego yakho ecaleni! Qaphela ukuba ungalenzi eli bali epanini ngokubhidanisa uthando kunye nothando kunye nokwahlula ngokukhawuleza njengoko ilangatye lidamba.
Njengemiqondiso emibini yoMlilo, inkanuko iya kuba khona kwaye ubushushu buya kunyuka ngokukhawuleza phakathi kwakho! Ubomi babo bokwabelana ngesondo buya kuba namandla ngakumbi, kunye nokubamba okuncinci kwendle.
Iingcebiso zothando kwesi sibini:
Musa ukubhidanisa uthando nothando. Utshaba lokuqala kwesi sibini yinkqubo yemihla ngemihla. Indlela eqhelekileyo ingababulala ngokucothayo, ngoko kuya kufuneka benjenjalo fumana ulungelelwaniso olufanelekileyo phakathi kwenkanuko kunye nesiqhelo.
I-Vedic Astrology: Yintoni iSayini sakho kunye nePlanethi?